Nanotechnology na-ewetara ndị ogbenye mmiri a na-aṅụ mmanya: ndị ọkà mmụta sayensị Mepụta ihe nzacha mmiri dị ọnụ ala maka obodo ime obodo - Ụwa 2022
Nanotechnology na-ewetara ndị ogbenye mmiri a na-aṅụ mmanya: ndị ọkà mmụta sayensị Mepụta ihe nzacha mmiri dị ọnụ ala maka obodo ime obodo
Ọ bụ n’afọ 2013, anyị bikwa n’oge a na-eyi obere lenses kọmputa n’ihu anyị, ụgbọ mmiri na-aga Mars, a na-arụkwa ụgbọ ala ọhụrụ nde ise kwa ọnwa. N'agbanyeghị nke ahụ, ihe karịrị nde mmadụ 750 na-agbasi mbọ ike ịchọta otu iko mmiri ọñụñụ kwa ụbọchị.
Ndị ọkà mmụta sayensị nọ n'India na-eji ike nanotechnology emezi ọdịiche dị na mmiri a, dị ka otu nnyocha sitere na Proceedings of the National Academy of Sciences.
Usoro nchacha mmiri ha, nke yiri ihe nzacha Brita® kwa ụbọchị, na-eji nanoparticles wepụ nje bacteria, nje na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ n'ime mmiri ọṅụṅụ.
Mpempe ite ọ bụla na-ejide ihe dị ka lita 10, nke ndị odee chere na ọ ga-egbo mkpa ezinụlọ nke mmadụ ise n'ime ime obodo India. Sistemu anaghị achọ ọkụ eletrik ma ọ ga-eri ihe na-erughị $2.50 kwa afọ.
Ihe mejupụtara nanoparticles dị na nzacha bụ ion ọlaọcha - ihe ọzọ na-eṅomi ihe nzacha Brita® - nke na-ewepụ nje bacteria na nje. Nzacha ahụ nwekwara nanomaterials na-ewepụ ogige ndị na-egbu egbu dị ka arsenic, lead, na ígwè.
Ndị otu ahụ na-anwale ngwaọrụ ahụ ugbu a na India, ebe ọ nwere ike iweta mmiri dị ọcha na ọtụtụ ọrụ na mpaghara ndị dara ogbenye.
"Ịkwasa teknụzụ a n'ụdị dị iche iche, dị ka katrij na sachets nwere ike ịmepụta nnukwu ohere ọrụ n'ime obodo ma tinye aka na akụ na ụba obodo," ka ndị edemede dere.
[site na Livescience]